Madaxweynaha Ismamulka Dawlad Degaanka Somalida oo ku Hakaday London – Rasaasa News
Jan 20, 2011 Madaxweynaha Ismamulka Degaanka Somalida Ogadeeniya oo ku Hakaday London
Madaxweynaha Ismaamulka oo ay la socdaan madax ka tirsan maamulkiisa iyo Dawlada federalka, ayaa waxay ka dageen garoonka diyaaradaha ee Heathrow, halkaas oo waftiga ay ku soo dhaweeyeen masuuliyiin ka tirsan safaarada. Waftiga ayaa ku sii jeeda dalka Maraykanka oo ay kaga qayb galidoonaan shirweyn oo in badan laga shin tirinayey oo dhacaya January 23, 2011.
Masuuliyiinta Ismaamulka Somalida ayaa waxaa ay bilaabeen markii ugu horaysay sanadkii tagay safaro ay ku tagayaan dalalka reer galbeedka, ka dib kolkii ay Jabhada ONLF, la gashay wadahadalo nabadeed dawlada Itobiya.
Dalalka reer galbeedka oo ay ku noolyihiin taageerayaasha ugu badan ee hawadin jiray halganka ay waday Jabhada ONLF, ayaa kolkii uu ururku nabad qaatay waxay dadweynuhu bilaabeen in ay soo dhaweeyaan masuuliyiinta dawlad degaanka Somalida iyo dawlada federalka ee Itobiya.
Inkasta oo uu heshiis la gaadhay ururka ONLF, dawlada federalka ah ee Itobiya, waxaa markii dambe ururka hankiisii hoos u dhigay kolkii ay dawlada Federalku ku xawishay dawlad degaanka Somalida. Arintaas oo hoos u dhigtay miisaankii uu ururku lahaa, ka dib kolkii ay dawlad degaanka Somalidu fulin wayday waxyaabihii lagu heshiiyey oo ay ugu horaysay siidaynta maxaabiista ururka ee jeelasha ku jira.
Hadaba, nn kasta oo qurba joogtu ay qalbiyada u furtay masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida, hadana waxaa jira su,aalo badan oo ay dadweynuhu isweydiinayaan. Kuwaas oo ah waxaa dhacday laakiin dhibaatooyinkii cadaadiska ahaa ee ka jiri jiray magaalooyinku wali halkoodii ayey ka sii socdaan.
Waxaa todobaadkan gudihiisa ka dhacay magaalada qabridahare oo ahayd magaaladii uu ururka ONLF, nabada ku qaatay dilal fool-xun, xadhig, cuno qabatayn iyo bando oo aan la garanaynin meel ay ka socoto, waxaana arintan la qaba magaalooyin badan.
maadaama waftiga uu hogaaminayo madaxweynuha DDS ay u socdaan in ay ka qayb galaan kulan balaadhan oo ay qaban qaabadiisu ka socotay dalka Maraykanka mudo saddex bilood ah, waxaa lagama maarmaan ah wixii lagu qancin lahaa dadweynaha nabada taageersan ee arkaya talaabooyinka khaldan ee ka socda degaanka Somalida, yaase masuul ka ah.
Waxaad moodaa in ay dadweynaha qurbo joogta ah isu qabadsiin la,a yihiin arimaha nabada ee socda iyo dhibaatooyinka haysta dadweynaha gudaha. Arintaas oo u egg in ay jiraan xoogaga doonaya in ayna wax nabad ahi ka dhicin dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waxaa aynu isha ku hayndoonaa, sida ay uga jawaabaan su,aalah aan sahalka jawaabta loogu heli karin ee khusaysa masuuliyiinta DDS.
Baaq ku Socda Bahweynta Beesha Aaden-khayr Cabdile